Ihhotela Laxmi Morjim kuyona (Morjim, India) inikeza inketho isabelomali ukuvakashela kule ipharadesi elishisayo ngokuthi Goa.
Ihhotela Laxmi Morjim kuyona (Morjim, India) - lokhu esiyi elincane enikeza izivakashi indawo yokuhlala ntofontofo ngentengo ephansi. Kulapha uzokwazi ukuba shí isiko lendawo. Ngaphezu kwalokho, wena unethuba lokuba eliyingqayizivele ukuzwa impilo amaNdiya kusuka ngaphakathi.
Amakamelo okulala awabange at Laxmi Morjim kuyona (Morjim, India), nakuba zinesizotha, kusafanele ahlinzeke izinga eyanele wenduduzo, ukuze izivakashi ungaba ukuphumula okuhle phakathi uhambo okukhulu ekuvakasheni. It has lonke ifenisha ezidingekayo kanye nezinye izikhungo, ngaphandle kulo Awukwazi ukwenza noyedwa isihambi yesimanje.
Naphezu kweqiniso lokuthi Laxmi Morjim kuyona (Morjim, India), ihhotela has izinkanyezi 2 kuphela, it has ngokwanele ingqalasizinda resort ocebile. Wena unethuba ukuya uhambo noma ukuqasha imoto wena ukubona zonke ezikhangayo zendawo. Futhi ungasebenzisa yokupaka, baklebhula izingubo zabo Ilondolo kanye nezakhiwo nokunye. D. gqamisa angabhekwa yokudlela, lapho ungakwazi bekuqonda ngokugcwele zonke flavour elikhanyayo we kazwelonke cuisine Indian, kanye ukuzama izitsha athandwayo kusukela ezinye izizwe zomhlaba.
Ihhotela Morjim Laxmi kuyona 2 * e Goa uku yayithandwa kakhulu izihambeli edolobhaneni Morjim. Ukuze ageze namagagasi mnene olwandle, kufanele unqobe kakhulu ngendlela 4 km ehlukanisa ebhishi kusukela ehhotela Ashvem. Ikhilomitha elilodwa kusukela ehhotela iyona edume Mordzhimsky ethempelini, okuyilona elisebenzayo futhi ukuvakashela zonke izivakashi, amaholide lapha.
Ekhuluma indawo ehhotela Morjim Laxmi kuyona 2 *, kuyafaneleka a impambano ezokuthutha ezinhle endaweni. Ngokwesibonelo, 17 kuphela km kusuka hhotela sebhasi Thivim, 25 km - sesitimela Mapusa, kodwa ibanga ngawo ohlelweni lwamazwe ngamazwe Goa Airport 55 km eside.
Zonke amafulethi Laxmi Palace kuyona Morjim basonta isigaba ejwayelekile. Abasakwazi libanzi futhi angazamukela abantu abathathu, emibili yayo zizobekwa sinenkosi-usayizi embhedeni (noma i-pair of ibalula), kanye guest extra - ohlakeni. isikhashana Pleasant angabhekwa yokuthi zonke ikamelo likwazi ukufinyelela kuvulandi yangasese. Akuyona nje kungenzeka ukuze ome sezimpahla zokubhukuda kanye amathawula, kodwa futhi zibabaza ukubukwa yensimu noma emgwaqweni, ehlezi Ababazi bakha izihlalo nge Upholstery esithambile.
Isisetshenziswa kwamakamelo amahhotela
Njengoba Laxmi Palace kuyona Morjim resort ehhotela 2 * isimo eliphansi imishini namakamelo awo futhi ngempela nesizotha. Noma kunjalo, bonke ezidingekayo ukuqinisekisa ubuncani wenduduzo izivakashi in the amafulethi khona. Ngokwesibonelo, igumbi ngalinye has:
fan, ukusiza okungenani kancane ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi hot sezulu Indian;
Kukhona nethelevishini encane, okwathi nakuba esimweni saso agugile, e enhle ngokwezinga elithile njengoba cable TV, phakathi lapho kukhona abakhuluma isiRashiya;
ifenisha ihlinzeka embhedeni enkulu noma a pair of ibalula, eliseceleni kombhede amatafula kanye ikhabethe ne iziphanyeko izinto zakho;
Igumbi ngalinye has a Ikhishi elincane nge esiqandisini ezincane, i yokucela kagesi, etafuleni lokudlela izihlalo, kanye nesethi izitsha kanye ikhofi;
yokugezela kuyinto eshaweni elihlangene nendlu yangasese, lapho, phakathi kwezinye izinto, kukhona okugeza izesekeli;
efulethini ngamunye has a emphemeni, ohlinzekela ngezintambo omiswe izingubo kanye amathawula, kanye pair of ukhululekile Ababazi bakha izihlalo ukuze uhlale ngaphandle futhi sijabulele ukubukwa ezizungezile.
Ihhotela Morjim Laxmi kuyona 2 * (Goa) inikeza izivakashi zalo ukujabulela izici ezilandelayo, okuvumela ingqalasizinda resort:
iwashi reception edeskini, lapho nganoma isiphi isikhathi sosuku noma ebusuku, ungathola izimpendulo zemibuzo yakho futhi ukuxazulula ezivukayo izinkinga inqubo eziphilayo;
yokudlela Indian cuisine kazwelonke, kanye ezihlukahlukene izitsha international, okuyinto zona zijwayele izivakashi European (ibhulakufesi kuphela kufakwe isilinganiso);
ehhotela kukhona inethiwekhi khulula inthanethi wireless;
Awukude ehhotela kukhona lolwandle yomphakathi, lapho ilanga imibhede nezambulela ayatholakala ukukhokhiswa okungaphezulu kokufanele (ihhotela banikelwe amathawula);
egcekeni ihhotela welula ingadi enhle obuluhlaza amasundu nezinye izitshalo exotic kukhona isici kule ndawo;
uma ufuna sunbathe ngaphandle kokushiya indawo ehhotela, inikeza ithala enkulu ongaphandle;
ihhotela unikeza isevisi ilondolo, okuyinto ngokushesha nangemali ephansi ukuwasha noku pussycat izingubo zakho;
ungakwazi ukuqasha imoto noma ezinye izindlela zokuthutha (ibhayisikili noma isithuthuthu) ngokuzimela ukuhlola konke ezikhangayo ezungezile futhi uvakashele kwamanye amadolobha;
ngoba imoto enikeziwe yokupaka yakho yaqashiswa, ukusetshenziswa okuyinto nakanjani free.
Ulwazi olubalulekile mayelana ehhotela
Mayelana leli hhotela kufanele bazazi ulwazi olulandelayo:
ukubhalisa bese uhlola ehhotela senziwa ngokuqinile emva 13:00, kungakhathaliseki sokufika isikhathi sakho;
Mhlazane zonke izimenywa kudingeka ukushiya amakamelo nezinto zazo isandla phezu okhiye edilini lomshado kuze 11:00;
ngenxa compact Igumbi usayizi nokuma kungenziwa isethwe embhedeni ezingaphezu kwesisodwa;
izingane kule ehhotela akukho ingqalasizinda ekhethekile, kanye intsha asikufanele izaphulelo kanye nezinzuzo yokuhlala;
ehhotela azikho terminals izinhlelo zokukhokha ngamazwe, ngakho wamukela imali.
nje ukhetho uphelele ukuze Morjim Laxmi kuyona 2 * isihambi isabelomali. Izimpendulo ngaye libhekene amazwana lokhu okuhle okwenzekile:
inzuzo enkulu yalesi ehhotela - ke Isabelomali ekhokhwayo (amanye amahhotela nge ezingeni elifanayo enkonzo, kodwa inqwaba izinkanyezi ibiza kakhulu);
inzuzo elingenakuphikwa kuba phambi egumbini kuvulandi, lapho ungakwazi izingubo uya woma nje kuphela, kodwa futhi ahlale ngaphandle izihlalo ukhululekile (endaweni ukwenza cishe ndawo);
yokudlela sasivumela engabizi nge okumnandi izitsha Indian ngamanani sasivumela ongaphakeme iqhathaniswa nezinye izikhungo;
amakamelo abasakwazi ivulekile;
Abasebenzi edilini lomshado inhlonipho kakhulu futhi kahle uyazi umsebenzi wakhe.
Phakathi kwezinkulumo ezingezinhle izivakashi yehhotela kuyafaneleka okulandelayo:
Amakamelo abanalo conditioning air kanye fan neze sibhekane ngokuphumelelayo ukupholisa umoya egumbini;
ehhotela kungekho-swimming pool, kuyilapho ebhishi eliseduze ukuze uthole isikhathi eside;
noma ehhotela noma ngokushesha endaweni oluzungezile azikho amathuba ezokungcebeleka;
Ifenisha emakamelweni isindala kakhulu, izinto eziningi okudinga ukulungiswa nokuvuselelwa kwazo ngokuphelele;
sasekuseni aphethwe ekuseni kakhulu (mayelana 6:00 am), kanye imenyu yabo ngempela nesizotha;
yokugezela amapayipi siphela, futhi kukhona amanye ukushoda amanzi ashisayo;
Amakamelo bahlanza Okuqukethwe akuzwakali kakhulu ngokunsomi nelineni embhedeni kanye amathawula futhi akazange ashintshe phakathi lonke isikhathi ukuhlala;
efulethini uthola umsindo emgwaqweni;
emnyango umnyango emphemeni ivaliwe ngempela alithembekile.
Noboya obumhlophe omdala: izimbangela kanye nokwelashwa
Uhlolojikelele Xbox 360 Adlalwa ezitolo
Ikhekhe nge Ubisi olujiyile ezisheshayo: zokupheka best
I-polymorphism - iyini? I-polymorphism ye-genetic
L-lysine: kwebalingisi nokusebenzisa elinikeziwe acid acid